Iikhosi-Imveliso yobomi boMbane-iGeofumadas
Ikhaya/Iikhosi-Imveliso yobomi beMveliso
Iikhosi-Imveliso yobomi beMveliso
Le yikhosi yentshayelelo yezixhobo zeSolidWorks kunye nobuchule obusisiseko bomzekelo. Iya kukunika ukuqonda okuqinileyo kweSolidWorks kwaye iya kugubungela ukudala imizobo ye-2D kunye neemodeli ze-3D. Kamva, uya kufunda indlela yokuthumela ngaphandle...
I-Ansys Workbench 2020 R1 Kwakhona i-AulaGEO izisa isipho esitsha soqeqesho kwi-Ansys Workbench 2020 R1 – Uyilo kunye nokulinganisa. Ngekhosi, iikhonsepthi ezisisiseko ze-Ansys Workbench ziya kufundwa. Ukuqala ngentshayelelo, siza kuba…